လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်းညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြယ်ပွင့်များအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟုသူမစွပ်စွဲထားသောနစ်ကိုးလ်အားချီးကျူးခြင်းလေ့လာမှုတွင်သူသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်ဟုပြောကြားသည် - Your Brain On Porn
နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးနှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးပညာသင်နှစ်ဖြစ်ပါသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း စာရေးသူ၊ သုတေသီများ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ သတင်းထောက်များ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရှိအမျိုးသားများ၊ ပညာသင်နှစ်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများကိုသက်သေပြရန်ရဲဝံ့သောအခြားသူများကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ သူမဖြစ်ပုံရသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားကဤသို့ရှင်းပြသည် -“အ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved လူတွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါသည်မှ.").
2019 -“ မန်နေဂျာအဖြစ်ဂုဏ်ယူသည်။အစစ်အမှန်” YBOP Twitter (@BrainOnPorn) နှင့် RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်ထို့အပြင်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုတို့တွင်ပါ ၀ င်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Gabe NCOSE၊ Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူများ” လည်းပါ ၀ င်သည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်လိင်စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္myာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများအားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမြှင့်ခြင်း (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အရှင်သခင်) RealYBOP တွစ်တာ) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူတင်းကျပ်စွာနှင့်ရန် RealYBOP Twitter ကိုအသုံးပြုသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ.
ဒုတိယဖြစ်နိုင်သမျှ quo လိုလားသောပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေသည် ၂၀၁၆ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ပိုက်ဆံတစ်လှည့်စီပေးခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုပုံအောက်မှာ FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး). Orgasmic ဘာဝနာ, တစ်ခုက Pseudo- အစွန်းရောက် ကြီးမားတဲ့နှစ်ကောင်အားသွင်း မိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏ ၀ တ္ထုကိုမည်သို့လေဖြတ်နိုင်သည်ကိုအမျိုးသားများအားသင်ပြရန် (ကြည့်ပါ) ဘီဘီစီက 10- အပိုင်းစီးရီး) ။ OM တွင်ပါဝင်နေသောစုံတွဲတစ်တွဲအားစောင့်ကြည့်နေသည့်ဤနေရာတွင် Prause ကိုပုံဖော်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါ၊ သို့သော် Clitoris ၏အလှအပလေ့လာမှု (OM) သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်သေချာသောဒဏ်ကိုခံရနိုင်သည် - လိုချင်သောအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များကိုရှာဖွေခြင်း၏စိန်ခေါ်မှု သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါပွတ် စက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုတေသီများကစောင့်ကြည့်နေစဉ်။ သူမ၏ OM စုံတွဲ ၂၅၀ ၏ပစ်မှတ်ကိုရောက်ရန် Prause ရှိနိုင်သည် ဘာသာရပ်အဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော်porn စက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုကတဆင့် s အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ အဆိုပါ FSC ဖို့မျက်နှာသာ? ထို့နောက်နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာတွင် Prause ကသူမ၏လာမည့် OM လေ့လာမှု (ယခင်က porn နှင့်လုံးဝမပတ်သက်သော) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပြိုကွဲစေလိမ့်မည်ဟုလူသိရှင်ကြားစတင်ခဲ့သည်။ ဒီအရေးအသား (ဇွန်လ, 2020) ၏အဖြစ် OM လေ့လာမှုပေါ်လာသေးသည်။
ဆောင်းပါးတွေက OneTaste ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွန်းရောက်အဖြစ်သာမကပန်းချီဆွဲဆောင်တဲ့စီးပွားရေးအလေ့အကျင့်ထက်နည်းနည်းပဲအသုံးချသည်။
Orgasmic Meditation Company ၏အမှောင်ဘက် (Bloomberg.com)
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ Orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်မှုအစွန်းရောက် OneTaste ၏ထင်မြင်ယူဆချက်အတွင်း (Playboy.com)
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအခြေစိုက် orgasmic meditation ကုမ္ပဏီ (SF Chronicle) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစေခံကျွန်အဖြစ်စွပ်စွဲခံရ
FBI က 'Orgasmic Meditation' Company OneTaste ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာ (Daily Beast)
The 'fingering' အစွန်းရောက် - OneTaste ၏စာရှုသူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံသည်အလွန်အရသာမရှိပါ
အမျိုးသမီးများအတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သော 'orgasm တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း' အစီအစဉ်အတွင်းကြည့်ရှုခြင်း (New York Post, 2020)
ယောက်ျားများသည်နေ့စဉ်အမျိုးသမီး ၄၅ မိနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့် orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်မှုအဖွဲ့ ၀ င်များသည်ကြွေးမြီများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်ဟုစွပ်စွဲကာဖောက်သည်များကို“ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း” တွင်ဆွဲဆောင်ရန်လိင်ဆက်ဆံရန်ပြောခဲ့သည် (Daily Mail, 45)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေ ပတ္တမြားကြီး Rubousky, အဆိုပါလူကြီးဖျော်ဖြေမှုများမင်းသားများအစည်းအရုံး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, Prause ကြောင်းဖော်ပြထား လေ့လာမှုဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အထင်ရှားဆုံး porn စက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စု / လော်ဘီမှတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ (Prause ကတည်းကဒီတွစ်တာကိုဖျက်ပစ်သည်။ )
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လေ့လာမှု (သို့မဟုတ်လေ့လာမှုများ) ဖြစ်ခဲ့သည် မူလက ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခံရဖို့ကဆိုသည် OneTaste, အကျိုးအမြတ်အတွက်အကျိုးအမြတ်အတွက်ကုမ္ပဏီ, Clitoral ခြယ်လှယ်သင်ယူဖို့သုံးရက်ကြာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအတွက် $ 4,300.00 အားသွင်း။ အဖြစ် ဒီ Bloomberg.com အတွက်ဖော်ထုတ်ဖော်ပြထား, OneTaste သည်မတူညီသော packages များကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
စာမျက်နှာ ၃ မှဖော်ပြထားသော OM လေ့လာမှုနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့သူကိုတရားဝင်ဖော်ပြချက် နီကိုးလ်ပရပ်စ်၏စာမျက်နှာ ၂၀ ရှိသော CV (Prause သည်သူ့ကိုယ်သူ“ အဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကိုသတိပြုပါ)
တရားရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ တွစ်တာများနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုခြိမ်းခြောက်သည့်မုသားစကားများတွင် Prause သည်ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏ပထမဆုံး Orgasmic တရားအားထုတ်ရန်လေ့လာမှုကို OneTaste ဖောင်ဒေးရှင်းမှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သည်ဟုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုသူမကိုရှုတ်ချကြောင်းဖော်ပြနေသည်။ သူမသည်ယခုလက်ရှိအသစ်စက်စက်တည်ထောင်ထားသော“ Institute of OM Foundation”, OM FREE” သို့မဟုတ်အခြား OM အဖွဲ့အစည်းများမှရန်ပုံငွေရကောင်းရနိုင်သည်။ သို့သော်သူမ၏ CV သည် Prause ကဲ့သို့ပင်မလိမ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပူးတွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးသူ Greg Siegle ၏ CV ကို OneTaste တွင် Prause & Siegle ၏ Orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသုတေသနကိုရန်ပုံငွေအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၈ ဆောင်းပါးတွင် OneTaste သည် shell ကုမ္ပဏီအမြောက်အများကိုဖန်တီးခဲ့ပုံပေါ်သည်။ NXIVM ထက်ပိုဆိုးတဲ့အစွန်းရောက်မှုလား။ - သူမ၏သမီးကို OneTaste မှကယ်တင်ရန်မိခင်၏အသနားခံချက်။' သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်:
ခိုင်မာသောဘဏ္componentာရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ အရင်းအမြစ်တစ်ခုအရ၊ မြောက်မြားစွာသော shell ကုမ္ပဏီများရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
OneTaste Line, LLC
OneTaste သမဝါယမ, Inc
OneTaste မီဒီယာ၊ LLC
Ehrlich ဓာတ်ပုံ & Shutterbug စတူဒီယို
Caravan, Inc မှ
ကြေးမုံ Clan, Inc
Insight Institute, LLC မှ
DBDD, LLC မှ
အဘယ်ကြောင့် OM shell ကိုကုမ္ပဏီများမှဖန်တီးမလဲ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ 2017 ယောဂဂျာနယ်ဆောင်းပါး OM လေ့လာမှုအတွက်ရန်ပုံငွေအဖြစ် OneTaste ကိုလည်းအမည်ပေးထားသည်။
Prause ကို OneTaste (Orgasmic တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း) လေ့လာမှုအတွက်အဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူအဖြစ်ဖော်ပြသည့်အပိုဆောင်းဆောင်းပါးများ -
ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲအော်ဂဇင်တရားအားထုတ်ခြင်း (OM) နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်လာမည့်သုတေသန
အဆိုပါ newish CEO ဖြစ်သူလေ့လာမှု OneTaste strokers နှင့်လေဖြတ်ခြင်း၏ 130 အားလုံးထံမှဦးနှောက်-လှုပ်ရှားမှုဖတ်ယူထားပြီးဖြစ်သော OM ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်အလောင်းအစားဖြစ်ပါတယ်လတ်ဆတ်သောလူအစုအဝေးဆွဲပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ, ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကဦးဆောင် လေ့လာချက် ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စာရွက်စာတမ်းအမြောက်အများကိုပထမဆုံးရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ “၎င်းသည်ဘာလဲ၊ အဘယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ရန်ထွက်ပေါ်လာသည်ဟူသောသိပ္ပံပညာသည်ချုံ့ချဲ့မှု၏ကြီးမားသောပမာဏဖြစ်သည်"ဗန် Vleck ကပြောပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာ ထား. , Prause ၏စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုအားကောင်းရန်ငှားရမ်းထားခဲ့သည် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်အငြင်းပွားဖွယ် ကုမ္ပဏီ (နောက်ထပ်ဆောင်းပါး: Tသူသည်အစွန်းရောက်များကို“ လက်ချောင်းများ” ကိုင်တွယ်သည်။ OneTaste ၏စာဖတ်သူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံသည်အလွန်အရသာမရှိပါ).
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖော်ထုတ်လိုက်သည့် OM Foundation သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် Onetaste ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ “ ဟောလိဝုဒ်မှထောက်ခံသည့်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအော်ဂဇင်ကိုးကွယ်မှုအတွင်း” (The Telegraph, UK)။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
Bloomberg သတင်းစာကိုထုတ်ဝေပြီးနောက်လအနည်းငယ်အကြာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် OneTaste သည်အမေရိကန်၏ရုံးအားလုံးကိုပိတ်ထားကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီးလူကိုယ်တိုင်သင်တန်းများနှင့်ဆုတ်ခွာမှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုတော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် OneTaste ဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိပါ။ ၎င်း၏နေရာတွင်ယခင်က OneTaste အဖွဲ့ဝင်များတည်ထောင်ခဲ့သော The Institute of OM ဟုခေါ်သောအဖွဲ့အစည်းအသစ်တစ်ခုရှိနေပြီ။ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကို 'Orgasmic Meditation (OM) မှတစ်ဆင့်လူတို့၏ကျန်းမာရေး၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်ကူညီပေးသည့်ပညာရေးကုမ္ပဏီတစ်ခု' ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ Daedone ၏ TEDx ဟောပြောချက်နှင့်သူမ Slow Sex စာအုပ်၊ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသောဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက် - 'OM ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုစိတ်ဓာတ်ကိုကုသပေးခဲ့သည်'; နှင့် OM-ing သီအိုရီ၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်တစ်ခု ('လေဖြတ်ခြင်းသည်အသိုက်ထဲ၌ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်း၊ လေဖြတ်သူသည်ခြေလက်များကိုလက်ဝဲခြေဖြင့်ကျော်ဖြတ်ပြီးလေဖြတ်ခြင်းဘေးတွင်ထိုင်။ အသိုက်ထဲ ၀ င်သွားသည်') ။
ယခင်က OneTaste ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည့် Anjuli Ayer ကို The ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည် OM ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက် Institute အဖွဲ့အစည်းရဲ့ CEO ဖြစ်သူ။ ယခင်က OneTaste ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူနှင့်တစ်ချိန်က၎င်းကို 'လိင်မှုဆိုင်ရာအပြည့်အဝစားခြင်းများ' အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သူ Joanna Van Vleck သည်သူမ၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်တွင်၎င်း၏လက်လှမ်းမီနိုင်သောညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်စာရင်းပြုခဲ့သည်။' Telegraph သည် Van Vleck နှင့် Ayer ကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း OM Institute ကအီးမေးလ်တောင်းဆိုမှုများကိုမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။
ပြီးတော့နီကိုးလ်ဒေဒို ထိတွေ့မှုဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်လှစ်လိုသောအမျိုးသမီးသည်လည်းလက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုအပြီးတွင် Daedone သည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သူမသည်ခဏတာတွင်ဘာလီနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သူမသည်ယခင်က OneTaste နည်းပြဆရာနှင့်အတူအီတလီ၌နေထိုင်ကြောင်းကြားသိခဲ့သည်။
သို့သော်သူမ၏အော်ဂဇင်၏အစွမ်းသည်ဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။ IMM ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် 'OM ကိုအခမဲ့လေ့လာပါ။ '။ အော်ဂဇင်တရားအားထုတ်ခြင်းအတွက်တရားဝင်လမ်းညွှန်ဖြင့်သင့်အိမ်တွင်စတင်ပါ။
အထက်ပါအချက်များမှန်ကန်ပါက၎င်းသည် Prause နှင့် FSC အကြားအလွန်ပျော့ပျောင်းသောအလုပ်လုပ်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြသည်။ Prause တုန်းက ၂၀၁၅ မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေး လူသိရှင်ကြား (နှင့်ပုံတူလက်ခံခဲ့သည်) နက်ရှိုင်းသောအိတ်ကပ် FSC ထံမှအကူအညီကို။ ၎င်းနောက်ချက်ချင်းဆိုသလို Prause ကသူမ၏သိပ္ပံဆိုင်ရာအလေးချိန်ကို FSC ၏အဓိကအစီအစဉ်များနောက်သို့ချလိုက်သည်။အဆိုပြုချက် ၆၀'ညစ်ညမ်းကြယ်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းမရှိ'၊ 'ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္isာရီ'၊ 'porn သည်အများပြည်သူကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းမဟုတ်'၊
လေ့လာမှုသည် ၂၀၂၀၊ ဇွန်လအထိမပြီးဆုံးသေးသော်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Prause ကသူမသည် Orgasmic Meditation လေ့လာမှုကိုညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုအား“ အတုအယောင်” အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးလေ့လာမှု porn အသုံးပြုမှုနှင့်မပတ်သက်။ ရှိသည်နှင့်ပုံရသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းစွဲမပါဝငျခဲ့ပုံရသည်။
အံ့သြစရာကောင်းတာက Prause ဟာနောက်ထပ်မှတ်ချက်များကိုတင်ခဲ့သည် beta-မူကြမ်းမှတ်ချက်အပိုင်း ပေါင်းစပ်သည်အခြားမှတ်ချက်ပေးသူထက်။ ထဲမှာ အခုအသစ်အဆိုပြုအောက်မှာမှတ်ချက်တွေအပိုင်း, Prause သည်သူမ၏ OM လေ့လာမှု (လက်တွဲဖော်လိင်၊ N = ၂၅၀) အကြောင်းသုံးကြိမ်တိုင်တင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ OM လေ့လာမှုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများမတွေ့ရဟုသူမှတ်ချက်ပေးသည်။ သူမဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ခဲ့ပါ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်သူမကရှိပါတယ်လို့ပြော):
သူမသည် 2018 ခုနှစ်, နောက်တဖန်ကြိုးစားသည်:
တရားဝင်အဘယ်အရာကိုသုတေသီတစ်ဦး debunked ရှိသည်ဟုအစဉ်အဆက်တောင်းဆိုမယ်လို့ သုတေသနတစ်ခုလုံးကိုလယ်ပြင် နှင့် "အတု" ခံရဖို့ အားလုံးယခင်လေ့လာမှုများ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူများကိုမစုဆောင်းသည့်စွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာများ၊ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းမထားသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်အတူလား။ Prause သည်သူမကိုယ်တိုင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာအလုပ်ကို အခြေခံ၍“ အတု” နှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူပြောဆိုမှုများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထိုးဖောက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ 10 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သူမကသူမ၏တွေ့ရှိချက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့ဟုလေ့လာဆန်းစစ်.
မည်သည့်ကြီးကြပ်မှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရပြီးယခုအခါကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သည် နှစ်ခုမီဒီယာမန်နေဂျာ / ဖြစ်မြောက်ရေးကနေ မီဒီယာ2×3ကုမ္ပဏီရဲ့သေးငယ်သောတည်ငြိမ်မှုကို "ပူးပေါင်းသူများ" သို့ (မီဒီယာ2×3သမတ Jesse ပှနျးတစ်ဦးကဲ့သို့မိမိကိုမိမိဖော်ပြထားတယ် ဟောလိဝုဒ်မီဒီယာနည်းပြများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူ.) သူတို့အလုပ်သူတို့ ရန်ဖြစ်ပါသည် နေရာအရပ်ဆောင်းပါးများ စာနယ်ဇင်းအတွက် Prause featuring, သူ့ကိုရှာဖွေ စကားပြောတွေ့ဆုံမှု လိုလားတဲ့ porn နှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနေရာများ။ တစ်ပါမယ်ဘက်မလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်ထူးဆန်းနည်းဗျူဟာ။
ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းကိုသွယ်ဝိုက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကြော်ငြာ hominem သူမက "ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ" (မကြာခဏကဤပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သားကောင်ဖြစ်ဟုဆိုကာ) အဖြစ်အမည်တပ်ထားသောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထားမှတ်ချက်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3.
ဤကျယ်ပြန့်သောစာမျက်နှာ နံပါတ် ၂ နှင့်ပတ်သက်သည့်တွစ်တာများနှင့်မှတ်ချက်များနမူနာတစ်ခုပါရှိသည် - သူသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ယင်း၏ရွေးချယ်ထားသည့်ရာထူးများကိုသူမအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံခြင်း။ နှစ်ပေါင်းများစွာသက်သေအထောက်အထားများပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးနောက် YBOP သည် Prause ၏တစ်ဖက်သတ်ကျူးကျော်မှုသည်မကြာခဏနှင့်မဆင်မခြင်သောအသရေဖျက်မှုအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်ဟူသောအမြင်ရှိသည် (သူမ၏သားကောင်များကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း "၏ကိုယ်ထိလက်ရောက်သူမ၏နောက်ယောင်","တကယ","သူမကိုမုဒိမ်းကျင့်ရန်အခြားသူများကိုအားပေးသည်, "နှင့်"နာဇီလက်သစ်ဖြစ်ခြင်း"), ငါတို့သူမ၏ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ရင်းဆန်းစစ်ရန်အနိုင်အထက်ဖြစ်ကြောင်း။
အဆိုပါ စာမျက်နှာ4အဓိကကဏ္ဍများသို့ကွဲပြား:
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်များတွင်တိကျသောမီဒီယာသတင်းဖော်ပြမှုတွင်အမှတ်စဉ်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲသူ၊ အသရေဖျက်မှု၊ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။ ၂၀၂၀ မေလ၊ Alex Rhodes & NoFap အကြောင်း Nicole Prause ၏လိမ်လည်မှုကိုထုတ်ဝေရန်အတွက်တောင်းပန်ရန်နှင့်သိသိသာသာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပေးရန် ScramNews မှထုတ်လွှင့်သော media outlet။ တကယ်တော့စာနယ်ဇင်းသမားတွေကသတိပြုရမယ် ScramNews မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှထွက်ခွာစေခဲ့သည်!